Nagu saabsan - Qingdao ShiningPlast Material Technology Co., Ltd.
FARSAMADA CARUURTA FARSAMADA CO., LTD.
Ku takhasusay soo saarista Warshadda 'PP / PE Weel Wejiga laga Xiran yahay iyo' Punbonded PP Nonwoven Fabric.
Iyada oo leh waayo-aragnimo weyn iyo faham warshadeed, waxaan ku dabooleynaa shuruudahaaga xalka ugu fiican.
25 sano horumarka iyo korodhka ayaa noo og inaanu helno xalka kuu fiican adiga.
Naftaada ku hay meel tayadeedu sarreyso oo annaga naga soocda meel dhexe.
Silsiladda sahayda oo dhammeystiran iyo tikniyoolajiyadda horumarsan waxay noo oggolaaneysaa inaan soo saarno badeecado fara badan oo leh xakameynta ugu wanaagsan.
Who Waxaan nahay
Qingdao ShiningPlast Material Technology Co,. Ltd waxay leedahay laba waaxood oo waa weyn, PP / PE silig iyo PP Spun-bonding nonwoven oo la aasaasay sanadkii 1995. Waxaan saldhig u nahay Qingdao China, magaalo deked qurux badan.
Waxaan nahay hogaamiye soo saare dhinaca-dhoofinta ku xeel dheer dhoofinta waddanka oo ku takhasusay soo saarista labadaba dharka loo yaqaan 'PP / PE' iyo PP-ga isku xirxiran. Annaga oo leh "go'an, hal-abuurnimo" ah, waxaan si qiiro leh u kasbanay oo aan sii wadnaa inaan ka helno oggolaansho ka timaadda macaamiisheenna caalamka oo aan ku gaadhnay sannad dakhli dhan 42 milyan oo doolar sanadkii la soo dhaafay.
Wkoofiyad Waan sameyneynaa
ShiningPlast waxay leedahay 2 dhir oo daboola dhul gaaraya 40000 sqm. iyo warshadaha oo ay shahaadooyin ka heleen BSCI, OEKO-TEX, ISO 14000 iyo ISO 9001. Shaqaalaheena 302, oo ay ku jiraan 2 R&D, ayaa qof walba aqoon u leh shaqadiisa. Waxaan leenahay 6 xarumood oo wax soo saar ah oo aan ka sameysaneynin maro ka badan 1300 tan wax soo saarkii bishii (ama 30000 gogo 'nooc kasta oo bacaha ah) iyo 3 khadad wax soo saar oo loogu talagalay PP / PE dharka dhogorta ah oo leh awood dhan 1000 tan bil kasta.
Waxaan had iyo jeer u jeednaa inaan kala duwanaano oo aan gaarno. Ku tiirsanaanta maamulka farshaxanka-farshaxanka, tikniyoolajiyada goynta, silsiladda sahayda dhameystiran, sidoo kale faa iidada isku-dhafka dhoobada iyo gogosha, waxaan soo saarnaa noocyo kala duwan oo badeecooyin ah kuwaasoo isugu jira alaab dhismeedka, tarpaulin, baakadaha, beeraha, illaa muuqaalka dhirta IWM. leh tayo sare.
Isku soo wada duuboo, waxaan dabooleynaa shuruudahaaga kala duwan.
Maxay ShiningPlast u tahay doorashadaada ugu fiican? Kaliya maahan sababta oo ah waxaan heysanaa silsilad saxan oo dhameystiran (qiime guud oo hooseeya) iyo tayo cajiib ah, sidoo kale sababtoo ah waxaan ognahay sida loo bixiyo adeeg qancin leh. Ka hadlida adeeg lagu qanco, ma ahan oo keliya fikrada khaldan. Waxaan ka hadlaynaa nidaam maareyn oo si fiican loo tababaray oo garanaya sida ugu dhaqsaha badan looga jawaabo shuruudaha macaamiisha iyo suuqa oo leh maskax furan. Waxaan ka hadlaynaa koox iib ah oo khibrad leh kuwaas oo adeegyadan ka shaqeeya sanado badan isla markaana garanaya bartaada xanuunka. Waxaan ka hadleynaa nidaam wax soo saar leh oo ka socda R&D illaa qorshe ballaaran oo wax soo saar, laga bilaabo baako ilaa dhoofinta, iwm. Dhammaan waxaas ayaa loo baahan yahay in si wada jir ah looga wada shaqeeyo si loo dejiyo qorshaha ganacsiga ugu wanaagsan adiga.
DHAMMAAN SANADKA 1995
SANADKA LABAAD EE SANADKA
Waan fahamsanahay shuruudahaaga waana dabooli doonnaa.
ShiningPlast, ma aha oo keliya lammaanahaaga ganacsi.